दुई नेपाली किशोरीलाई भारतमा बली दिने योजना ‘विफल’ , २ जना प’क्राऊ !
September 30, 2020 1041
बली दिन भारततर्फ लैजादै गरिएकी दुई किशोरी’को नेपाल भारत सीमाको भाण्टा’वारी नाकाबाट उ’द्दार गरिएको छ ।
सुनसरीका प्रह’री प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार कार्कीका अनु’सार सप्तरी घर भएका ती किशोरीहरुलाई भारत’तर्फ लैजादै गरिएको अवस्थामा भारतसँग सीमा जोडिएको सुनसरीको भाण्टाबारी नाकाबाट उ’द्दार गरिएको हो ।
प्रहरीले उद्धार गरेका युवती र पक्राउ परेका युवक – तस्बिर (न्युज२४नेपाल)
का’र्कीका अनुसार नेपाल र भारत तर्फका संयुक्त सुरक्षा’कर्मीको टोलीले सीमा क्षेत्रबाट उनीहरुको उद्दा’र गरेको हो । शंका लागि सोध’खोज गर्ने क्रममा किशोरी’संगै रहेका २ पुरुषलाई अनुसन्धान’कालागि नियन्त्रणमा लिएको सुनसरी प्र’हरीले जनाएको छ ।
प्रवक्ता का’र्कीका अनुसार उ’द्दार गरिएकामा १९ वर्षीया किशोरी’सँगै अन्दाजी २२ वर्षकी अर्की किशोरी समेत छिन् । प्रहरीले किशोरीसँगै रहेका २ जना पुरुषलाई प्रहरी’ले नियन्त्र’णमा लिएको छ ।
प्रह’री नि’यन्त्रणमा रहेका एक पुरुषले भने प्र’हरी समक्ष आफु किशोरीको आफन्त रहेको बताएका छन् । नाताले भिनाजु पर्ने व्यक्तिले सालीलाई पूजाको लागि भारत लैजाने सहमति अनुरुप आफू उनीहरुको सुरक्षाका’को लागि संगै आएको भनी प्र’हरी समक्ष बयान दिएको प्र’हरीले जनाएको छ ।
यद्यपि सो विषयमा समेत अनुसन्धान भैरहेको प्रह’रीको भनाई छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्की’का अनुसार उ’द्दार गरिएका युवतीहरुले आफुहरुलाई सिमापारी नजिकैको भारतीय बजार भीमनगरमा रहेको मन्दिरमा पूजाकालागि भनेर ल्याइएको प्र’हरी समक्ष बताएका छन् ।
उनीहरुले प्रह’रीलाई जानकारी गराए अनुसार भारत तर्फ लैजानु पूर्व उचाई समेत नापिएको थियो । त्यसैगरी हातको रेखा समेत हेरी पुजाका लागि योग्य भनि ठहर गरिएको थियो ।
प्रहरीलाई उनीहरुले दिएको जानकारी अनुसार सिमापारी नजिकै रहेको कुनै एक मन्दिरमा साँझको बेला आयोजना हुने पूजामा ध्यानमा बसे वापत १,२ लाख रकम दिने भनिएको थियो । किशोरी’हरुलाई पुजामा ध्यानमा बस्ने सर्तमा लगेको देखिएकाले उनीहरुलाई बली’का लागि लगिएको हुन सक्ने प्रह’रीको अनुमान छ ।
प्रह’रीको प्रा:रम्भिक अनुसन्धा’नमा युवतीको परिवारलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई पूजाका लागि भनी भारत तर्फ लैजादै गरिएको देखिन आएको छ । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार चौधरी थर भएका युव’तीहरु निकै सोझा छन् ।
नियन्त्रणमा रहेका पुरुष र उनीहरुको संलग्नता’सहित घट:नाको विषयमा थप अनुसन्धान भैरहेको सुनसरी प्र’हरीले जनाएको छ । प्रह’रीले किशोरीसँगै रहेका सप्तरीका साहिल मन्सुरी र सिर’हाका जीवन साहलाई अनुसन्धा’नकालागि नियन्त्रण’मा राखेको राखेको जनाएको छ । – न्युज२४ नेपाल बाट
Prevह्वात्तै बढ्यो संक्रमितको संख्या, आज नेपालमा कति संक्रमित थपिए ? हेर्नुहोस्
Nextआजपनि सुनको भाउ बढ्यो, कति पुग्यो तोलाको ? हेर्नुहोस्
आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घट्यो कि बढ्यो ? हेर्नु’होस्…
ज्योति लाइफ बीमाको ६६ करोडको आइपिओ आउँदै
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (114970)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (81138)